ScummVM - yekumhanya SCUMM-based adventure mitambo | Linux Vakapindwa muropa
ScummVM chirongwa, asi hachisi chirongwa chakajairika. Kana iwe uri mudiwa wemhando yepamusoro kana retro mitambo yemavhidhiyo, kunyanya iwo graphic adventure mazita ekare, une chokwadi chekuchida. Seizvo zita rayo rinoratidzira, iwo SCUMM chaiwo muchina.
Kana iwe usati waziva chii icho icho SCUMM, kutaura kuti ndiyo vhidhiyo yemitambo injini yakagadzirwa naLucasArts munguva yakapfuura. Ipfupi kune Script Creation Utility yeManiac Mansion, kana script yekushandisa utility yeManiac Mansion. Haisi chaiyo injini yemifananidzo, asi iri pakati nepakati pemutauro neinjini kugadzira mitambo yemitambo kana mitambo yemavhidhiyo. Uye, sekuratidzira kwezita, pakutanga rakagadzirirwa 1987's Maniac Mansion.
Zvakanaka, uchinge wataura izvozvo, ScummVM ichakubvumidza iwe kumhanyisa iwo ese emitambo yekutamba anoshandisa iyo SCUMM injini, yakagadzirwa nemakambani akaita Revolution Software kana Yekushanya Nyoro. Kuti uite izvi, iwe unongoda chete kuti iyi software iiswe uye uve nemusoro wedhata mafaira aunoda. Nekudaro, ichatsiva zvinoitwa zvemutambo wekutanga, ichibvumira mimwe mitambo kumhanya pachirongwa chavasina kuitirwa pakutanga.
Ehezve, ScummVM ine rezinesi GNU GPL, saka mahara software, uye mahara. Uye zvakare, chirongwa ichi chakagadzirwa neiyo ScummVM Project, iri multiplatform uye yakanyorwa uchishandisa mutauro weC ++. Masisitimu ayo aripo ndeye Android, GNU / Linux, Haiku, macOS, zvakare Microsoft Windows, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira, unogona kuiwana mune mamwe marevista eakakura ma distros, kana mu software zvitoro seUbuntu Software yekuisa nyore. Uye zvakare, kana iwe uchifarira kuziva rumwe ruzivo nezve chirongwa, iwe unogona zvakare kushanyira iyo zviri pamutemo webhusaiti. Kubva kunzvimbo yekurodha pasi iwe uchaona kuti inowanikwa seDEB, SNAP, AppImage package, nezvimwe. Iwe zvakare une ruzivo, runyorwa rwemitambo, Etc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » ScummVM: chirongwa chekumhanya nhabvu mitambo inoenderana neSUMUM
Chrome 90 inosvika nerutsigiro rweAV1 uye kugadzirisa muWebXR